लकडाउनमा घरमै स्वादीष्ट पानी पुरि यसरी बनाएर खानुहोस – Newslines Nepal
लकडाउनमा घरमै स्वादीष्ट पानी पुरि यसरी बनाएर खानुहोस
प्रकाशित मिति : ८ बैशाख २०७७, सोमबार १३:१३
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोनाभाइरस संक्रमणवाट बच्न र बचाउन नेपाल सरकारले गरिरहेको लकडाउनको अवस्थामा घरमै स्वादीष्ट पानी पुरि यसरी बनाएर खानुहोस। पानीपुरी भन्ने साथ कतिपय व्यक्ति सडक पसल सम्म पुगेर पानीपुरीको स्वादको मज्जा लिन पुग्छन्। कसैले घरमा रेडिमेड पुरी र मसला किनेर ल्याएर बनाउने गर्छन् तर आफैलाई तयार पारेका भेटिदैन। आज सेफ लक्ष्मण भण्डारीले तपाईहरुलाई पानी पुरी कसरी घरमै बसेर बनाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी दिदै हुनुहुन्छ ।
कसरी पानी पुरी बन्छ ?
पहिला पानीपुरी बनाउको लागि सुरुमा त पानीपुरीको डल्ला बनाउनु पो पर्‍यो ।कसरी बन्छ होला यति सानो पुक्क परेको पुरी । हामी लाई आदत नै भै सक्यो रेडिमेट किनेर खाने तर अहिले त उपाय छैन आफुले बनाउन बाहेक त्यसको लागि एकदमै सजिलो उपाय छ ।
पानी पुरी बनाउने उपाय –
२०० ग्राम मैदामा ३०० सय ग्राम सुजि राख्नुहोस । विस्तारै थोरै–थोरै गरेर मन तातो पानी राख्दै मुछ्दै जानुहोस । पिठो सुख्खा रोटी बनाउने पिठोभन्दा साह्रो बनाउनुहोस । उक्त मुछिएको पीठोलाई १०-१५ मिनटको लागि भाँडोमा ढकनीले छोपेर राख्नुहोस र त्यस पछि कराइ मा तेल तताउनुहोस । मुछेको पीठोलाई सानो सानो गोलाकार डल्लो बनाई सकेसम्म पातलो हुने गरि बेल्न सुरु गर्नुहोस बेल्दाखेरि बुक्का पीठो र तेल चाहिँ नहाल्नुहोला । अझ सानो सानो डल्ला बनाई बेल्न गार्हो भए ठुलो ठुलो पातलो हुने गरि बेलेर तयार पारिएको पीठोबाट सानो सानो गोलो रोटी काट्न सुरु गर्नुहोस । यसका लागि सबैभन्दा सजिलोको लागि सानो सानो गिलास अथवा कुनै बोतलको ढक्कन प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ । अब ती साना रोटिहरूलाई तेलमा फुराउन सुरु गर्नुहोस । जब ती रोटी फुरेर सानो सानो गोलो आकारमा तयार हुन्छन् । पुरी हरुलाई लाई कराईमा भाएको तेलको मात्रा हेरेर एकै पटक फुराउँदा हुन्छ । पुरी चाडो पाक्ने भएकोले फर्काइ फर्काई चलाई रहनु पर्छ हल्का रातो रातो भएपछि निकाल्नुहोस् ।
अब बाँकी रह्यो पुरिको डल्लो भीत्र राख्ने फिलिङ र पानी कसरी तयार पार्ने त ?
त्यसलाई पनि बनाउन सुरु गरौ मुख रसाउने पनि अमिलो
घर मा के छ त ?
कागती ,अमिलो ,चुक ,भिनेगर ,इमली (पानीमा भिजाउने र छान्ने),भकिम्लो (पानीमा भिजाउने र छान्ने),लप्सी को धुलो(पानीमा भिजाउने र छान्ने) जेहोस एउटा चिज त चाहियो अमिलो को लागि पिसेको पुदिना र धनिया को पात (धनियार पुदिनाले पानीको स्वाद मिठो बनाउँछ ।) अमिलोको लागि माथिको कुनै एक चिज लिने, भुटेर पिसेको जिरा र धनिया गेडाको पाउडर, विरे नुनको धुलो, रातो खुर्सानीको धुलो सबै लाई एक लिटर जति पानी मा मिलाउनुहोस । पानी पुरीको पानी चाहिँ तयार भयो ।
अब चाहियो आलु को अचार जो पुरियामा औंलाले सानो प्वाल पारेर राखिन्छ । यसको लागि स-साना १०-१२ वटा उसिनेर खोल्साएको आलुलाई मिच्ने , उमालेको चना या केराउ, प्याज, नुन, खुर्सानीको धुलो, हरियो खुर्सानी, भुटेर पिसेर राखेको जिराको र धनिया को पाउडर लाई राखेर मज्जाले चलाउने ।लौ अब त अचार पनि तयार भयो । केलाई बेर गर्नु पर्‍यो र पुरियामा आलु को अचार औला ले दुलो परि राख्ने अनि दुई चम्चा पानी पुरीको पानी राख्ने र क्वाप्प क्वाप्प खाने मज्जा संग परिवार संग रमाउने ।
चाट पनि बनाउन सक्नु हुन्छ है ! आलुको अचारले भरेको पुरीमा थोरै दहि थोरै केचप (टमाटो सस) घरमै बनाएको गोलभेडा को अचार भएनी हुन्छ ,भुटेर पिसेको जिरा र धनिया गेडाको पाउडर, विरे नुनको धुलो, रातो खुर्सानीको धुलो लाई हल्का छर्ने ,दालमोठ या भुजिया माथि बाट राखी पानीपुरीको मज्जा लिन समेत सकिन्छ ।
हाम्रो बजार मा बेच्ने ले एसिड हालेर बनाएको अमिलो स्वादीष्ट त नहोला फरक स्वाद भए पनि स्वस्थ्यकर हुन्छ भन्ने यो भान्छे ठम्याई छ ।